Izisombululo zeshishini |
Ukuphazamiseka kombane kuthungelwano lukaloliwe ayisiyongxaki nje; bakwayizoyikiso ezinzulu kwimpilo nakukhuseleko. Ukuba amandla ahambe kwisikhululo sikaloliwe, inkqubo yomlilo, inkqubo yezokhuseleko, inkqubo yomnxeba, inkqubo yeempawu, kunye nenkqubo yedatha iya kuwa. Isikhululo sonke siza kungena kwimeko embi kunye noloyiko ...
Izityalo eziMandla ziJolise kuKent Power ibonelela ngesisombululo samandla esibanzi sezityalo, ukuqinisekisa ukuhanjiswa kombane okuqhubekayo kwimeko apho isityalo samandla siyeke ukuhambisa amandla. Izixhobo zethu zifakwe ngokukhawuleza, zidityaniswe ngokulula, zisebenza ngokuthembekileyo kwaye zinika amandla ngakumbi. Umbane osebenzayo ...
IKent Power ibonelela ngejenereyitha yamandla ombane asetyenziselwa ezomkhosi ukufezekisa iimfuno zobuchwephesha zemizimba yamanye amazwe. Ukusebenza okuthembekileyo namandla anokuthenjwa kubalulekile ukuba kuqinisekiswe ukuba imishini yokhuselo igqityiwe ngempumelelo kangangoko kunokwenzeka.
Iiprojekthi zangaphandle zeJenereta yokuseta isisombululo seKent Power kwiiprojekthi zangaphandle ziqinisekisa ukusebenza ngokukuko kokuvavanywa kwemigodi kunye nenkqubo. Ngokwendlela yokusebenza, ukusebenza kunye nokugcinwa kweseti yejeneretha, izakhiwo zangaphandle zineemfuno ezingqongqo kwiiseti zomvelisi. UKent Power une ...
Isisombululo saMandla eSisombululo seoyile samandla eKent sibonelela ngesikhundla esipheleleyo sezisombululo zokukhusela amandla kwimihlaba yeoyile. Ukukhutshwa kweoyile kunye negesi kuhlala kubekwe kwiindawo ezikude ezineendawo ezinabemi abambalwa, kwaye ezi ndawo kunye neegridi zamandla ezinokuba sesichengeni ngakumbi kule ndawo ...
Isibhedlele iGenerator Seta isisombululo Esibhedlele, ukuba ukungaphumeleli kwesixhobo kuyenzeka, amandla kaxakeka kufuneka abonelelwe ngokhuseleko lobomi kunye nemithwalo ebalulekileyo yesebe kwimizuzwana embalwa.Ngoko izibhedlele zinamandla okufuna ngakumbi. Amandla ezibhedlele avumela nakuphi na ukuphazamiseka kwaye kufuneka abe ...
Umnxeba kunye neZiko ledatha
Iijenereyitha zaMandla oNxibelelwano ngomnxeba zisetyenziswa ikakhulu kwizikhululo zeemfonomfono kwishishini leemnxeba. Ngokwesiqhelo, iiseti zejenereta ezingama-800KW ziyafuneka kwisikhululo sephondo, kwaye iiseti zomvelisi zingama-300KW ukuya kuma-400KW ezifunekayo kwisikhululo sikamasipala, njengoko amandla okulinda ekonyusa isisombululo soMbane weTelecom Ukusetyenziswa kweejenreyitha ...
Isakhiwo sigubungela uluhlu lwasendle, kubandakanya izakhiwo zeofisi, izakhiwo ezinde, iindawo zokuhlala, iihotele, iivenkile zokutyela, iivenkile ezinkulu, izikolo, njl.njl. Izakhiwo Generator Cwangcisa Isisombululo Building Cove ...
Ukuseta uMvelisi weeBhanki Iiseti zomvelisi wedizili zimele ukutyala imali kunye nokuthembeka kwazo, ngakumbi kubukho beeseti zejenereta yokulinda, kubaluleke kakhulu. Iibhanki zinamanani amakhulu eekhompyuter eziphambili kunye nezinye izixhobo, ezinokuthi zisebenze kuphela kwi ...
Isisombululo saMandla oMgodi Ngokwesiqhelo iijenereyitha zamandla zisetyenziswa njengowona mthombo wamandla kubomi bemihla ngemihla, ubunjineli kwindawo enemigodi. Isisombululo samandla eKent kwimigodi siqinisekisa ukusebenza okuphezulu kokuhlola kunye nenkqubo. Sibonelela ngeenkqubo zamandla ezinokuthenjwa kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo, okunokwandisa ixesha lokugqibela ...